Wasiirka Diinta oo Ku Baaqay In Axsaabtu u Aqbalaan Natiijadda Doorashadda | Somaliland.Org
Wasiirka Diinta oo Ku Baaqay In Axsaabtu u Aqbalaan Natiijadda Doorashadda
December 5, 2012	Jidah (Somaliland.Org)- Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Jamhuuriyada Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa ugu baaqay ururrada siyaasadda ee ku tartamaya doorashada deegaanka inay aqbalaan natiijada ka soo baxda.
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Jamhuuriyada Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed oo ku sugan dalka Sucuudiga ayaa waxa ku hambalyeeye shacbiga reer Somaliland sidii nabadgalyada ahayd ee ay doorashadii deegaanka u codeeyeen, isla markaana waxa uu tilmaamay inay xukuumaddu ku mahadsan tahay sida ay uga qayb qaadatay qaybtii kaga aadanayd.
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta oo shalay qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Jidah ee wadanka Sucuudiga, waxa kale oo uu tilmaamay in doorashadii deegaanka ay si hufan u dhacday.
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta isaga oo arrimahaas ka hadlaya waxa uu yidhi. “Waxaan marka hore salaamayaa Madaxweynaha qaranka Jamhuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) Madaxweyne ku-xigeenka waxaan halkan uga hambalyeynayaa shacbiga reer Somaliland sidii xilkasnimada iyo nabadgelyada lahayd ee ay uga qayb qaateen doorashooyinkeenii qiimaha waynaa oo ahayd doorashadii labaad ee golaha deegaanka oo runtii tii ku xigtay ay ahayd 2002 muddo toban sano ka bacdi inaynu doorashadaa galno oo aynu ku galno awoodeena gaarka ah iyo dhaqaalaha Illaahay ina siiyay iyadoo taageerada ay beesha caalamku ina siinaysay aanay meesha ka maqnayn, haddana xukuumadda jirtaa mahad ayay ku leedahay inay abaabushay oo ay diyaarisay qaybtii kaga aadanayd in doorashooyinka lagu galo, dadweynahana si fiican oo hufan uga qaybgalisay uguna fududaysay dhinaca amniga. Mahadaana waxa iskale xukuumadda u hogaaminayo Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici).”
Wasiirka Diinta iyo Awqaaftu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi. “Runtii halkan aan joogno umadda reer Somaliland ee degan dalka Sucuudiga ee jaaliyada aad iyo aad ayay uga warwarsanayeen markii hore watii talooyinka codsigii nabadgalyo ay soo gudbinayeen, maantana farxad ayay inoo wada tahay in si nabadgalyo ah ay inoogu hirgasho doorashadaasi. Waxa kale oo aan ku boorinayaa shacbiga reer Somaliland iyo axsaabtaasi sida hufan u dhacday ee markhaatiga laga ahaa ee caalamka oo dhan arkayay in aan ka codsado mar labaad in wixii natiijo soo baxa ay ku kalsoonadaan.” ayuu yidhi Wasiirka Diinta iyo Awqaaftu.
Previous PostWasiirka Caafimaadka oo furay kulan lagu dersayo siyaasadda fayo-dhawrkaNext PostMadaxweyne Siilaanyo oo la arkay isagoo dhex Lugaynaya Magaaladda Hargeysa	Blog